HomeChampions LeagueYaa Lahaa Khaladka Goolkii Obameyang Ka Dhaliyey Real Madrid?
Khalad ayey uga dhasheen labada gool ee laga dhaliyey Real Madrid kulankii barbar dhaca ee Borussia Dortmund, hase yeeshee, khaladka cid gaar ah ayaa gashay, waxaana uu dhex yaallaa difaaca iyo goolhayaha oo kaliya, weerarkuna shaqo kumay lahayn.
Goolka koowaad, kubbad lagu toogtay goolka Real Madrid ayaa waxa dib isaga soo celiyey goolhaye Navas, waxaanay ku dhacday Ramos oo usii sallaxay laacibka Afrika ee sannadka ee Obameyang oo si sahlan goolka u dhex-dhigay. Kubadda labaadna, khalad iyo khalkhal difaacu sameeyeen ayuu ka yimid, waxaana kubbad dhinaca laga soo dhiibay oo u dhexaysay Varane iyo Obameyang si khalad ah u doontay Carvajal, taas oo inta ay dhaaftay u tagtay Andre Schurrle oo laag xoog badan daba-mariyey goolhayaha. Way caddahay in kubbadda labaad khaladkeedu u dhexeeyo difaaca gaar ahaan Varane iyo Carvajal, laakiin kubadda hore ee Ramos u dhigay Obameyang, ayey cid gaar ahi dusha saaratay.
Goolhaye Keylor Navas oo markii ay ciyaartu dhamaatay warbaahinta la hadlay, ayaa waxa uu dusha saartay khalad uu sheegay inuu goolka sababay, waxaanu yidhi: “Waan qirsanahay inaan khalad sameeyey goolka hore. Kubadda ayaa si layaab leh iigu timid, si fiicanna umaan arkaynin.” Sidaas ayuu yidhi.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uuu intaa raaciyey: “Dhamaanteen waynu naqaanaa marka aynu khalad samayno, waana in aynu ka shaqayno sidii horumar looga samayn lahaa khaladaadka yaryar ee dhaca.”
Goolhayaha oo dedaal badan sameeyey xalay kaddib dhaawac muddo dhawr bilood ah uu ku maqnaa, kulankiisanina ahaa kii ugu horreeyey, ayaa waxa uu amaanay ninkii shaqada usii hayey ee goolhaye Kiko Casilla oo uu tibaaxay inuu shaqo fiican qabtay, uuna ku faraxsan yahay sida uu u ciyaaray.
Leicester City vs Leeds 3-1 – Highlights & Goals Carabao Cup
Atletico Oo Lugaha Iskaga Duubtay Real Madrid
Rashford Oo Lagu Darayo Xulka Ingiriiska
16/03/2017 Abdiwahab Ahmed